ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံ ၉ ခုသို့ခရီးစဉ်များရပ်နားခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဥရောပ9နိုင်ငံသို့ခရီးစဉ်များရပ်နားခဲ့သည်
15 / 03 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ဝန်ကြီး Turhan ကဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ သြစတြီးယား၊
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turan၊ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန Bilkent Campus ရှိကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီး။ Fahrettin Koca သည်တရားရေး ၀ န်ကြီး Abdulhamit Gülနှင့် Coronavirus သိပ္ပံကော်မတီတို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Turhan အာရုံကိုဆွဲဘို့တူရကီအတွက် coronavirus အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးယူထားသောအရာကမ္ဘာ့အစီအစဉ်အချို့အစီအမံယူလိုအပ်ပါတယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကဒီဖြစ်ပွားအစီအစဉ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ကနျြးမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏န်ကြီးဌာနတင်းကြပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့တို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုဤကပ်ရောဂါမှကာကွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာတစ်ဖက်မှရရှိပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်မီတိကျစွာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသည်။ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရန်အစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Turhan ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့တွင်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှလေယာဉ်ပျံသန်းမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ အီရန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်မှအီရန်၊ ဤတိုင်းပြည်များမှကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များမရှိသေးပါ။ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုယူဖို့လေယာဉ်တွေကိုသာခွင့်ပြုပါတယ်။ ယခုအခါဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ သြစတြီးယား၊ ဆွီဒင်နှင့်နယ်သာလန်သို့မနက် ၈ နာရီမှAprilပြီ ၁၇ ရက်အထိပျံသန်းမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဒီနေ့စွဲကိုရှေ့သို့နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်သည်။
Bursa Yunuseli စီစဉ်ထားပျံသန်းမှုလေဆိပ်မှာရပ်တန့်ခဲ့ကြ
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Kocaeli တွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်သည်
ဂျာမဏီ Ordu-Giresun လေဆိပ်အကြားလေကြောင်းစတင်နှင့်အတူ
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် Samsun Start ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
မေလ 15 အတွက် Begin မှအစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်များတွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
ကြောင့်ပါရှအဘိဓါန် Iranian မီးရထားစီမံကိန်းအဆက်မပြတ်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်း